Otú nyefee foto site na iphone na kọmputa
Ọ bụ otu n'ime ajụjụ ndị na nwere ọtụtụ azịza na kasị nkịtị n'etiti ha bụ na data anọgide enem ma ọ bụrụ na e nyere usoro a soro. The wuru na windows atụmatụ-ekwe ka ndị ọrụ na-eme ka n'aka na photos na ndị ọzọ na mgbasa ozi na-ele ya anya n'ụzọ dị iche nke na-eme ka o kwe onye ọrụ iji na-enweta egwu mmetụta. Àgwà ndị a na-agụnye nkwado, zuru foto akara na ngosi mmịfe nke ka ndị ọrụ na-na-na-agbanwe media ntọala na ala na afọ ojuju.
2.6 Nyefee Ndi ana-akpo
Part1: 1-pịa iphone foto transfer nyefee foto site na iphone na kọmputa Part2: Iji Email nyefee foto site na iphone na kọmputa Part3: Iji eriri USB nyefee foto site na iphone na kọmputa
Part1: 1-click iphone foto transfer nyefee foto site na iphone na kọmputa
Wondershare TunesGo Ochie bụ otu nke kasị mma software omume na-ekwe ka ndị ọrụ nyefee photos na ndị ọzọ na media si IPhone ka windows kọmputa na ala. Ọ na-na--ahụ kwuru na atụmatụ na e agbakwunyere n'ime software bụ ndị nke na-adịghị ike dị na software omume nke yiri genre. E nwere ọtụtụ ndị ọzọ bara uru nke na-eji Wondershare TunesGo Ochie na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ka ndị a:
• Ọ na-pụrụ iche kara nke snaps na-adịghị agbanwe ya mgbe niile.
• Ọ bụ 100% nchebe iji.
• Iji a usoro dị ka nyere ntụziaka na-ahụ na e nweghị ígwé ojii na gburugburu ebe obibi gụnyere nke na-eme ka usoro nke transfer nchebe.
• The photos na-agafere na ụdị nke batches iji jide n'aka na oge na-azọpụta.
• Ihe omume e mepụtara na a ụzọ mee n'aka na ndị nile dị iche iche nke media ebudatara na ala.
Nke a ngwa ka doro anya gbanwere ụzọ na-ebufe data na site na PC mgbe ọ na-abịa IPhone. Ụlọ ọrụ emewo-nyere ọrụ a owuwu nke na nbudata na ngwa na-enweghị ọbụna ịzụta ya na Ịzụ bụ naanị mere mgbe zuru afọ ojuju nke punter chọrọ. Ikwe omume a na-arụ ọrụ na zuru ike ga-emekwa ka n'aka na foto na ndị ọzọ na media transfer mgbe anọgide otu ihe iseokwu n'ihi na onye ọrụ na usoro na-aga n'ihu were were na na akara na chọrọ nke ahịa.
Detuo music, listi ọkpụkpọ, videos si iPod, iPhone & iPad ka iTunes Library, gị na PC maka ndabere. Jikwaa & Nyefee Photos, Ozi, ana-akpo & faịlụ n'etiti iPhone, iPad & PC.
Otú iji ya
m. Download software Wondershare TunesGo Ochie.
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ịgbaso kpaliri iji wụnye software usoro dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
III. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na software na ulo oru ka e gosiri n'okpuru:
too ogologo. Ekwentị na-ahụ na-jikọọ na kọmputa site na eriri n'ọdụ ụgbọ mmiri dị ka e gosiri n'okpuru:
v. Ugbu a onye ọrụ kwesịrị ka pịa photos na ekpe panel nke software usoro dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
vi. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na Mbupụ na nhọrọ họrọ si n'elu ụlọ mmanya dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
VII. Site dobe ala onye ọrụ mkpa ijide n'aka na na "Mbupụ na My Computer" na-ahọrọ iji wuchaa usoro na zuru:
Part2: Iji Email
Ọ bụ nnọọ ihe kasị kacha usoro iji jide n'aka na photos na-agafere na kọmputa enweghị ihe ọ bụla hassle na-eme ka o kwe omume na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ usoro na-etinyere iji jide n'aka na usoro-aghọ mfe na onwe reliant .
m. N'ime menu nke iPhone onye ọrụ kwesịrị ka họrọ photos dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
ii. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ ahụ kwesịrị iji họrọ foto nchekwa nyefe nke a chọrọ ka e gosiri n'okpuru:
III. On n'elu nri akuku njirimara kwesịrị pịa edit dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru;
too ogologo. Na ala n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na na òkè button na-enwe dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
v. Na-esote ihuenyo onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na mail na-ahọrọ dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
vi. Onye ọrụ ugbu a kwesịrị iji jide n'aka na adreesị ozi-e na-mesịa na foto e zigara na ụdị nke na-ekekọta dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
VII. Site na ịnweta otu email na PC onye ọrụ nwere ike ibudata niile foto na ụdị nke Mgbakwụnye mezue usoro.
Part3: Iji eriri USB
Ọ nwekwara ike na-ahuta ka otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe na kasị adaba usoro na bụkwa n'efu na ike na-ahuta ka wuru na arụmọrụ nke ekwentị. Na-esonụ bụ usoro a ga-etinyere na nke a:
m. Onye ọrụ kwesịrị ka jikọọ IPhone ka PC na enyemaka nke eriri USB dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ileta https://www.apple.com/itunes/download/ iji jide n'aka na ọhụrụ version nke iTunes ebudatara.
III. Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na kpaliri na-soro na-eme ka n'aka na software ebudatara:
too ogologo. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na photos taabụ na-ahụ pịrị na ekpe panel dị ka e gosiri na foto n'okpuru:
v. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ kwesịrị ka mmekọrịta foto dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
vi. Dị ka ihe ikpeazụ nzọụkwụ onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na itinye button a pịrị na-photos na PC.
The Filiks na e kwuru na a nkuzi na-adịghị nnọọ bizi na foto transfer ma onye ọrụ nwere ike na-emetụtakwa ndị a ụzọ na-eme ka n'aka na videos na ndị ọzọ na ntụrụndụ stof na-agafere ka PC enweghị ihe ọ bụla hassle. Tupu n'itinye nkuzi ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọ bụla nzọụkwụ na-juputara etinyere na nzọụkwụ ọzọ bụ naanị soro Ozugbo gara aga otu kemgbe a ịga nke ọma. Kama nke ahụ onye ọrụ nwere ike inwe mbipụta nke nwere ike ịbụ na ụdị data nyefe ma ọ bụ nsogbu ndị a na-atụghị anya dapụtara na ngwaọrụ nakwa dị ka mwute Ama mebiri.
Olee otú Detuo Photos si PC ka iPhone
Enwere m ike ịkpọ BLU-ray na Windows Media Player?
Olee otú ibudata na wụnye Windows 10 na kọmputa gị
Nwere ike anyị na-enweta Windows 10 N'ihi na free
Dr. DivX Alternative maka Windows: More Formats, kasị Video Ntụgharị
Enwere m ike Wụnye ClipWrap N'ihi Windows?
> Resource> Windows> otú nyefee Photos si iPhone ka Computer